थाहा खबर: नेविसंघका नेतालाई यसकारण झपारे देउवाले
काठमाडौं : शुक्रबार नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको जन्म जयन्तीको अवसर पारेर कांग्रेसकै भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो। उक्त कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि थिए। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा कार्यक्रममा बोल्न मञ्चमा जानेबित्तिकै एकदमै आक्रोशित रुपमा प्रस्तुत भए। देउवाले कोरोना महामारीको बेलामा यस्तो कार्यक्रम किन गरेको भन्नेदेखि नेविसंघ कहाँ छ भन्नेसम्म प्रश्नहरु नेविसंघका नेताहरुलाई तेर्स्याए।
देउवाले के भनेर झपारे?
‘सोसल डिस्टेन्सिङ भनेको छ तर टाँसिएर बसेको छ । लाज पनि छैन। कहाँ छ डिस्ट्यान्सिङ? कार्यक्रम सानो गरे हुन्छ। कि ठूलो ठाउँमा गरे हुन्छ,’ उनले भने, ‘सबैले कार्यक्रम गर्न छाडेका छन्, नेविसंघले गर्नुपर्ने, बढ्ता जान्ने भइ हाल्नुपर्ने?’ उनले नेविसंघको झगडा विद्यार्थीहरु नमिलेकोले भइरहेको पनि बताए। त्यति मात्रै हैन देउवाले नेविसंघले अहिले कहीँ कतै चुनाव जित्ने अवस्था नरहेको भन्दै हकारे।
‘विद्यार्थीहरु मिले समस्याको समाधान हुँदैन? आफू आफूबीच झगडा गरेको गर्‍यै छ,’ उनले भने, ‘म चारपल्ट प्रधानमन्त्री भइसकेँ, यस्तै हिसाबले तपाईंहरु प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ? क्याम्पसमा हामीले जहाँ पनि जितेका थियौं। अहिले हारेको हार्‍यै छ लाज पनि छैन।’ उनले गाउँगाउँ गएर संगठन बनाउन पनि नेविसंघलाई निर्देशन दिए।
‘कहाँ छ नेविसंघ? नेविसंघ कहीँ छैन। स्कुलमा नेविसंघ नहुँदासम्म पार्टी बलियो हुँदैन,’ उनले थपे, ‘स्कुलमा नेविसंघ बनाऔं, गाउँमा बनाऊँ, कहाँबाट जित्ने? गाउँमा जाऊ अनि बल्ल मकहाँ आऊ’
यसरी किन जँगिए?
देउवा प्रायजसो सार्वजनिक कार्यक्रममा मुस्किलले पाँच मिनेटभन्दा धेरै बेर बोल्दैनन्। शुक्रबारको कार्यक्रममा पनि त्यस्तै भयो। आजको कार्यक्रममा देउवा सुरुदेखि नै झोक्किनुको पनि कारण रहेछ। नेविसंघको तदर्थ समितिका अध्यक्ष राजीव ढुंगाना लगायतलाई सभापति देउवाले समितिलाई पूर्णता दिनको लागि तयारी गर्न निर्देशन दिएको पनि लामै समय भइसकेछ। अहिले तदर्थ समितिको कार्यकाल सकिन एक महिना मात्रै रहेको बेला समितिलाई पूर्णता दिने कुरा देउवा कहाँ पुगेपछि उनी झोक्किएका हुन्।
‘राजीव दाइहरूले सबैतिरबाट दबाब आइरहेकाले पार्टी सभापति कहाँ खै कोमार्फत समितिलाई पूर्णता दिने कुरा पुर्‍याउनुभएछ,’ नेविसंघका एक नेताले थाहा खबरसँग भने, ‘सभापतिज्यूले महाधिवेशन नै गर्नुपर्ने बेलामा केको पदाधिकारी थप्ने भन्दै त्यो बेलामा पनि हप्काएर पठाउनु भएको रहेछ आज त सार्वजनिक कार्यक्रममै हप्काउनुभयो।’ गत माघमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गराउन भन्दै राजीव ढुंगानालाई नेविसंघको तदर्थ अध्यक्ष तोकेका थिए।
तर, अध्यक्ष ढुंगानाले न त महाधिवेशनको मिति तोक्न सकेका छन् न त कार्यसमितिलाई नै पूर्णता दिएका छन्। गत मंगलबार पार्टी कार्यालयमा रामचन्द्र पौडेल पक्षका केही नेविसंघका नेताहरुले सभापति देउवालाई देखाउँदै किन मौन सभापतिज्यू, नेविसंघलाई १० जनामा मात्र सीमित गर्ने हो? लेखेको प्लाकार्डसहित प्रदर्शन गरेपछि उनी नेविसंघको नेतृत्वसँग थप रुष्ट बनेका थिए।
नैनसिंह महर नेतृत्वले महाधिवेशन गर्न नसकेपछि उनले नेविसंघबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि अनिश्चित बनेको नेविसंघ महाधिवेशन कोरोना महामारीले झनै अनिश्चित बनेको छ। तदर्थ समितिको म्याद एक महिना मात्रै बाँकी रहँदा पनि संघको अधिवेशनको म्याद तोकिएको छैन।
अख्तियारका प्रमुख आयुक्त घिमिरेलाई पनि कोरोना संक्रमण